Albedo oo ka yimid Dunida Waa maxay sideese saameyn ugu yeelataa isbedelka cimilada | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah arrimaha saameynta ku leh nidaaminta heer kulka heer caalami waa albedo ee dhulka. Waxaa loo yaqaanaa saameynta albedo waana halbeeg saameyn weyn ku yeelanaya heerkulka sidaas darteedna wuxuu saameynayaa isbedelka cimilada. Waa inaad sifiican u ogaataa saameynta albedo si aad uhesho gabagabo loona sameeyo qorshayaal kaa caawinaya yareynta saameynta albedo. kulaylka caalamiga ah.
Maqaalkan waxaan ku sharxi doonnaa waxa albedo ee Dunidu tahay iyo sida ay u bedbeddesho una beddesho heerkulka adduunka. Sidee ayay dhacdadani u saameyneysaa isbeddelka cimilada?
1 Waa maxay albedo ee Dunida?
2 Albedo iyo isbedelka cimilada
3 Kaymaha waxaa loo arkaa jinniyo
4 Xalka dhibaatada
Waa maxay albedo ee Dunida?
Waxaan soo sheegnay in saameyntani ay saameyn ku yeelaneyso heer kulka caalamiga ah qaab gaar ah. Albedo waa saameyn dhacda marka falaadhaha qorraxdu ku dhuftaan dusha sare isla markaana falaadhahaas dib loogu celiyo bannaanka hore. Sida aan ognahay, ma wada aha shucaaca qoraxda taas oo saameyn ku leh meeraheena ayaa sii joogaya ama dhuuqaya dhulka Qayb ka mid ah shucaaca qoraxda waxaa dib ugu milicsanaya jawiga iyadoo daruuro ay jiraan, mid kalena waxaa lagu hayaa jawiga iyadoo gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo inta soo hartana dusha sare ayey yimaadaan.
Hagaag, waxay kuxirantahay midabka dusha sare ee falaadhaha qorraxdu ku soo dhacayaan, qaddar badan ayaa ka muuqan doona ama qaddar ka badan ayaa la nuugo doonaa. Midabada madow, heerka nuugista ee falaadhaha cadceedda ayaa ka sarreeya. Madow waa midab awood u leh inuu dhuuqo inta ugu badan ee kuleylka. Taas bedelkeeda, midabada khafiifka ah waxay awoodaan inay muujiyaan qadar badan oo shucaaca qoraxda ah. Xaaladdan oo kale, bartilmaameedku waa midka leh heerka ugu sarreeya ee nuugista. Tani waa sababta tan ka hor tuulooyinka kaliya lagu arki jiray guryo cadcad. Waa dariiq looga ilaaliyo guriga ka soo baxa kuleylka badan ee xagaaga sababo la xiriira kuleylka oo yaraaday.
Loogu talagalay dhammaan dusha sare ee meeraha iyo nuugitaankooda iyo heerarka milicsiga falaaraha qorraxda waxay ka kooban yihiin albedo ee Dunida. Waxay kuxirantahay midabka ugu badan ama noocyada kala duwan ee dusha sare ee ka jira meeraheenna, waxaan nuugi doonnaa shucaac qorraxda dhacdooyin badan ama ka yar. Xaqiiqadani waxay saameyn weyn ku leedahay isbedelka cimilada sida aan ku arki doono maqaalkan.
Albedo iyo isbedelka cimilada
Xaqiiqdii waad isweydiineysaa waxa ay saameyntani ku leedahay isbedelka cimilada iyo kuleylka adduunka. Hagaag, albedo-ka Dunida aad ayuu saameyn ugu leeyahay, marka lagu daro dhammaan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo kororka ku-fiirsashadooda jawiga. Ulaha dhulku waxay leeyihiin saameyn albedo ah oo aad loo yaqaan, maaddaama oogada dusheeda ay gebi ahaanba caddaan tahay joogitaanka daboolka dhinacyada. Tani waxay ka dhigan tahay in qayb weyn, haddii aysan badnayn, shucaaca qorraxda ee ku dhaca dusha sare ee ulaha uu dib u milicsanayo oo uusan u kaydsanayn sidii kuleylka.
Dhinaca kale, sagxadaha leh midab madow sida badda, badaha iyo xitaa keymaha waxaan ka helnaa sicir barar sare. Sababtuna waxay tahay badaha oo midab ahaan u madow sida treetops. Maaddaama qaddarka yar ee shucaaca qoraxda uu muuqdo, heerka nuugitaankiisu wuu sarreeyaa.
Xiriirka ka dhexeeya albedo ee Dunida iyo isbeddelka cimilada ayaa ah iyadoo sida ugu dhakhsaha badan ay u dhalaali doonaan koofiyadaha cirifka, tirada falaadhaha qorraxda ee lagu celinayo meelaha bannaanka ah ayaa sii yaraanaya. Qaybta dhalaalaysa waxay midabkeeda ka beddeleysaa iftiin una beddelaysaa mugdi, sidaa darteed kuleyl badan ayaa la qabsan doonaa heerkulka dhulkuna wuu sii kordhi doonaa xitaa intaas ka sii badan Tani waxay la mid tahay sida loo caddeeyo ee dabada ka qaniinaysa.
Waxaan kordhineynaa heerkulka adduunka sababo la xiriira kororka gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee haysa kuleylka jawiga, sidaas darteedna, koofiyadaha cirifku way dhalaalayaan, taas oo, iyaduna, gacan ka geysatay saameyn qaboojin iyada oo ay ugu wacan tahay milicsiga qorraxda ku xanniban dusheeda
Kaymaha waxaa loo arkaa jinniyo
Maaddaama aadamuhu had iyo jeer u janjeero inuu aado xag-jirnimo, isla marka ay maqlaan in kaymaha ay leeyihiin heerar sarreeya oo nuugista falaadhaha cadceedda ayay gacmahooda ku tuuraan madaxooda. Kaliya kuma dhacdo tan, laakiin wax kasta oo ayan ogayn. Wax walba ma aha hal xad-dhaaf ah mana aha wax walba mid kale. Aynu aragno, waa run in kaynta ay awood u leedahay in ay nuugto shucaac badan oo qorraxda ku shaqeeya, markaa heerkulku wuu kordhi doonaa. Dheeraad ah, maaddaama daboolka barafku uu dhalaalayo, waxaa lagu beddelayaa dusha sare ee badda, iyadoo tan sii mugdi ah iyo, sidaas darteed, kordhinta nuugitaankiisa.
Hagaag, xitaa haddii ay arintu sidan tahay, waa inaan maanka ku haynaa in keymaha ay ku jiraan malaayiin nooc oo dhir ah oo fuliya photosynthesis taasna waxay nadiifin doontaa jawigeenna, yareynta uruurinta gaasaska lagu koriyo ee aan ku sii deynay jawiga. Suura gal maaha in bini aadamku aakhirka jinka kaymaha ku kiciyo iyaga oo si khaldan u sheegaya macluumaad aysan awoodin inay daweeyaan ama aysan si sax ah u fahmin.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira daraasado badan oo xaqiijinaya saameynta ay ku leedahey keymaha waaweyn marka la joogo roobka. Tirada badan ee kaymaha, ayaa sii kordheysa tirada roobka, taas oo aasaas u ah abaarta adduunka ee uu sababo isbeddelka cimilada. In kasta oo ay doqon tahay in la sheego, haddana taxaddarrada oo dhami way yar yihiin, laakiin dhirtu sidoo kale waxay na siisaa oksijiin aan neefsanno oo aan la'aanteedna noolaan karin.
Uma baahnid inaad jinniyada geedaha ama aad waxyaabo aad u xun u qaaddid. Waxa ugu muhiimsani waa in la yareeyo isku-uruurinta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee hawada ku jira iyadoo la adeegsanayo tamar la cusboonaysiin karo iyo wax ka beddelka caadooyinka isticmaalka si loo beddelo nidaamka dhaqaale. Tani waxay sababi doontaa in gaasaska yareynta kuleylka ee jawiga ku jira, sidaas darteedna tiirarka dhulku ma dhalaali doonaan. Haddii ulaha aan la dhalaalin, aagga dusha sare ee kuleylka qaadaa ma kordhin doono, sidoo kalena heerarka baddu ma kici doonaan.
Haddii aan wax beero oo aan kordhinno baaxadda keymaha, waxaan sidoo kale sii yareyn doonnaa isku-ururinta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ku jira jawiga.
Waxaan rajeyneynaa isbeddelka cimilada inuusan sii socon doonin oo dadku aysan sii wadi doonin inay jinniyo u sameeyaan sababahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Albedo ee Dunida
Maqaal kale oo aad u Wanaagsan oo wax ku ool ah, ayaa si weyn wax u baraya fikradahan NOLOSHA AH… Hambalyo GERMAN P.
Ku jawaab luis ac